Egwuregwu crossword 8 kacha mma maka gam akporo | Gam akporosis
Na gam akporo Play Store enwere ọtụtụ egwuregwu inyocha. E nwere ụdị dị iche iche: agbụrụ, egwuregwu, ụmụaka, agha royale ma kwụsị ịgbakọ. Ot'odi, otutu adigh eme ka anyi chee echiche rue na uche ayi agha itinye ike ya nile, karia nke ncheta na amamihe. Nke a bụ ihe egwuregwu egwuregwu dị mma maka, ka ha na-anwale ike ọgụgụ isi anyị.
Ọ bụrụ na-amasị gị iche echiche egwuregwu dị ka crosswords, a post bụ n'ihi na ị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, lee anya na agbanyeghị, n'ihi na n'okpuru ị ga-ahụ ndepụta na 8 egwuregwu kacha mma maka gam akporo na ugbu a dị na Playlọ Ahịa Google. Otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịmasị gị.
Egwuregwu niile a kpọtụrụ aha ma kọwaa n'okpuru bụ n'efu ma nwee aha ọma na Storelọ Ahịa Play. N'aka nke ha, ha na-etu ọnụ maka ọtụtụ nbudata na ọkwa dị elu nke na-egosi na ha bụ ndị kachasị mma na otu ha. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 CodyCross - Crosswords
2 Obe okwu - na Spanish + egwuregwu
3 Isi okwu - Spanish
4 Free Crossword
5 Isi Okwu - Akọwapụtara Onwe Onye
6 Okwu nke ebube: Jikọọ Leta edemede
7 Okwu okwu Crossword Chọta okwu
8 Okwu Okwu: Egwuregwu Crossword kachasị mma
CodyCross - Crosswords
E nweghị ụzọ ka mma isi malite a mkpokọta karịa na CodyCross, otu n’ime egwuregwu crossword a kacha mara amara maka gam akporo oge niile. Ma ọ bụ na aha a abịaghị ka akpọ ya n'efu.
Ọ nwere ezigbo ihe ọchị na ọ andụ, edi k don'tyak oro afịna fi; Ga etinye itinye amamihe gị n’ule ahụ ma ọ bụrụ n’achọ idozi ule niile na okwu okike ga - egosi n’iru n’egwuregwu. Na mgbakwunye, ị ga-enwe ike ịmụ ihe n'okporo ụzọ ahụ, yabụ na ị gaghị abụ onye mmụta ma ọlị.
Can nwere ike ịmụ okwu ọhụrụ na nkọwa ya na gburugburu, ajụjụ, na ahịrịokwu maka ahịrị ọ bụla. Jiri ike puru iche nke i nwere iji kpughee leta nke azịza ya ma zere ịrapara mgbe ị na-achọ ịkọwa okwu okwu.
E nwere ọtụtụ narị ọkwa iji chọpụta ma gafere, ya mere, ọtụtụ awa nke igwu egwu na-emesi obi ike. Ihe ọzọ bụ na CandyCross nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị ntanetị, nke na-eme ka ọ dị mma igwu egwu mgbe ị na-eme njem, na oge echere ma ọ bụ n'ebe ọ bụla na ọnọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị kpọọ ya n’enweghị ,ntanetị, ị ga-enwe atụmatụ ole na ole, yabụ maka ahụmịhe zuru oke ma na-atọ ọchị, jiri ya na playntanetị kpọọ ya.
Akụkụ ọzọ dị egwu nke egwuregwu egwuregwu a bụ na ị nwere ike ijikọ ya na akaụntụ Facebook gị. Nke a ga - enyere gị aka ịmekọrịta ọganihu gị na ngwaọrụ gị niile.
Obe okwu - na Spanish + egwuregwu
Ọ bụrụ n ’ị na - achọ ụdị egwuregwu crossword ọzọ, nke a nwere ike ịbụ otu maka gị. Mezue usoro nile a na-ahụ anya na nke kwụ n’ahịrị nke a na-etinye n’ihu gị na gosi ụbụrụ gị na ọkwa ọ bụla.
Enwere ọtụtụ ọkwa, nke ọ bụla siri ike karịa nke ọzọ; Ọzọkwa, ha enweghị njedebe, n’ihi na enwere "generator na enweghi ngwụcha oku." Nke a bụ egwuregwu na-eche echiche nke ị nwere ike iji ụbụrụ gị rụọ ọrụ mgbe ị na-achọ ịkọwa ahịrịokwu nke ọtụtụ narị okwu ederede maka gị.
Ma ọ gwụbeghị. Egwuregwu a nwekwara egwuregwu nkọwa, nke ị nwere ike ịmụta okwu ọhụrụ yana, ya mere, nkọwa ha, n'ụdị ajụjụ. Were okwu ị maghị na-eri nri gị lexicon.
Enwere nkọwa na ntanye maka ọnọdụ ọ bụla, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị nke ukwuu ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta azịza na nkwupụta ma ọ bụ ihe ọ pụtara. Ọzọkwa, maka ndị chọrọ ịhazi interface nke egwuregwu ahụ, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe typeface ma ọ bụ font.
Developer: Ngwa Quarzo
Isi okwu - Spanish
Nke a bụ egwuregwu ọzọ magburu onwe ya "itu oyibo" O nwere 100 isiokwu dị iche iche, site na nke ị nwere ike iji ọtụtụ awa na awa na-enye isi iji nye mkpebi na ahịrịokwu niile mgbe ị na-amụta ihe ọhụụ, melite ncheta gị ma tinye ụbụrụ uche gị n'ule ahụ. O doro anya na ọ bụ egwuregwu na-atọ ọchị.
Inwere ike ịrịọ maka enyemaka iji dozie ya site na mkpụrụedemede ekpughere ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye otu ahịrị, ị nwekwara ike ịnwa ikpughe okwu niile. N'ezie, gbalịa idozi okwu ndị dị na cross kpamkpam site na onwe gị, ọ bụ ezie enyem aka enweghi oke, so stalling bụ ihe anaghị eme n'egwuregwu a, belụsọ na ịchọrọ idozi ihe niile n'onwe gị.
Y’oburu n’achoghi ka oghere juru ju oji, inwere ike idozi mbadamba ihe icho gi ma hota agba ha. N'otu oge ahụ, interface na atụmatụ nke egwuregwu ahụ dị mfe, mana arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ na ịnwe mkpụrụ okwu Spanish na aka ezughị ma ịchọrọ itinye asụsụ ndị ọzọ n'ọrụ mgbe ị na-egwu egwu ma na-edozi crosswords, egwuregwu a bụ ezigbo maka gị. Na ajụjụ, O nwere ihe dị ka mkpụrụ okwu okwu 100 na Spanish, 400 na Bekee na 65 na Portuguese, ezuru gị iji mụta ọtụtụ okwu ọhụrụ ma melite okwu gị n'asụsụ dị iche iche.
Nke a bụ egwuregwu dị fechaa nke na-enweghị obere ihe karịrị 6MB. Na mgbakwunye, dị ka ndị nke gara aga, ọ chọghị njikọ tontanetị ga-akpọ, ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu n'oge ichere ma ọ bụ nkụda mmụọ. Ihe ọzọ bụ, ọ bụ otu n'ime ụdị ewu ewu nke ụdị ya, yana ihe karịrị nde 1 nbudata na akara ngosi 4.4 nke dabere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90 ratings.
Isi Okwu - Akọwapụtara Onwe Onye
Enwere ihe karịrị 5.500 ajụjụ ị ga-eche ihu na egwuregwu egwuregwu a. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji oge ole na ole mee ya iji gafee ọkwa ya niile ma zaa nkwupụta niile ahụ, ịgaghị ezi ezi. Kwesiri itinye ihe omuma gi n'ule n'ọtụtụ ebe na isiokwu iji dozie onwe gi dika onye kachasi ihe omuma, nke a na-emeghi n'abali, ma obughi na egwuregwu a.
Dị ka ndị gara aga, ị nwere ike igosipụta njide gị na egwuregwu a, n'ihi na ị ga-echeta ọtụtụ data iji dozie ma zaa ajụjụ niile. Na mgbakwunye, akara egwuregwu okwu egwuregwu na egwuregwu mgbagwoju anya dị ka nke a gosipụtara iji nyere aka belata nrụgide. Izu Ike mgbe ị na-ejupụta igbe niile nke ọtụtụ mkpụrụedemede dị njikere ime, ma ọ bụrụ na ịchọtaghị azịza nke ihe, wetuo obi: ị nwere ike ịgakwuru enyemaka iji gaa na ajụjụ ndị na-esonụ yana, ya mere, okwu mkpirisi , nke na-abawanye na ihe isi ike ka ị na-ebuli elu.
Na maka ndị na-achọ iji dozie esemokwu okwu n’abalị ma ọ bụ ọnọdụ ọkụ, ma tupu ha hie ụra ma ọ bụ n’oge ọ bụla, enwere ọnọdụ gbara ọchịchịrị dị na egwuregwu a, nke na-enyere aka ilekọta echiche ahụ site na nchapụta ihuenyo ...
Developer: Egwuregwu FgCos
Okwu nke ebube: Jikọọ Leta edemede
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe egwuregwu crossword dị iche na nke ndị ọzọ, Okwu nke Ebube bụ nke kachasị mma maka gị, ebe ị ga-enwe ike ịchọta okwu dabere na akara ngosi dị mkpirikpi. Kedu ka ị ga-esi achọpụta ha? Ọfọn, mfe. Naanị jikọọ mkpụrụedemede na-egosi na ihuenyo ma dozie ederede niile dịịrị gị ma dabere na ọtụtụ gburugburu.
Ozi ọma ahụ bụ na usoro mkpebi a achọghị ka ị mata azịza nye ajụjụ ndị a ma ọlị. N'ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike ịkọ nkọ, ma si otú a na-aga n'ihu na egwuregwu ahụ. Ọ bụ ụzọ ọzọ dị mma iji mụta, yabụ na ịnweghị ike ịme uche na ncheta gị, mana jiri egwuregwu a dị ka ngwa mmụta, n'ihi na enwere ọtụtụ ịmara!
Isi ihe ọzọ dị mkpa maka Okwu nke Ebube bụ na na-eme ka ị gaa njem gburugburu ụwa. Mara mba dị iche iche mgbe ị na-edozi okwu mgbagwoju anya na ịdọpụ uche na njem gị! Ọ nwekwara otutu egwuregwu mode, nke ị ga-ekerịta mbadamba na ndị enyi 3 ma ọ bụ ọbụna soro ha merie.
Site na akara kpakpando 4.5, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde abụọ na nkọwa ziri ezi na ọkwa, na ihe karịrị 2 nde nbudata, ọ bụ otu n'ime egwuregwu crossword kachasị egwu na gam akporo smartphones. N'ezie, anyị anaghị eche otu nfe ihu; ogo egwuregwu a bụ 100 MB.
Developer: Egwuregwu Fugo
Okwu okwu Crossword Chọta okwu
Ọzọ dị ukwuu crossword egwuregwu, aka ala, na otu onye na a mara mma enyi na enyi interface. Na mgbakwunye, ọ bụ aha ọzọ nke na-eme ka otu egwuregwu ahụ dị egwu dị ka akọwapụtara na mbụ. N'ebe a, ị gha ejikọ mkpụrụedemede iji zaa ma maa mkpebi nke akara nke ọ bụla nke ọtụtụ egwuregwu mgbagwoju anya a na-etinye n'usoro.
Na mbido, ihe isi ike ahụ pere mpe, mana, ka ị na-aga n'ihu, ihe niile ga-adịwanye mgbagwoju anya. Agbanyeghị, ịkwesighi ichegbu onwe gị. Enwere akara ngosi ị nwere ike ịrịọ iji chọta leta na okwu nke ihe kariri 300 ederede n’ebe ahu.
Okwu Crossword Chọta okwu
Developer: Oghere dev
Okwu Okwu: Egwuregwu Crossword kachasị mma
Iji mechaa mkpokọta a, anyị na-ewetara gị egwuregwu ọzọ yiri nke abụọ gara aga, nke ị ga-ejikọkwa okwu iji dozie ọtụtụ narị okwu ederede.
N'ebe a, ị ghaghi njem ụwa ka ị na-edozi mkpụrụokwu okwu, nke ọ bụla siri ike karịa nke ọzọ. Na-emikpu onwe gị ruo ọtụtụ awa na awa na egwuregwu a ka ị na-etinye ikike ọgụgụ isi gị n'ule ahụ.
Developer: Egwuregwu okwu gbara ọchịchịrị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » 8 egwuregwu kacha mma maka gam akporo